Kuratidza zvinyorwa neelebheri nebe
Černá hora - chivakwa pamharadzano
Gomo Dema (Schwarzenberg muGerman kana Spiegelkoppe) igomo riri kumabvazuva Giant Mountain, iri 3,5 km kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta spa reJanske Lazne uye 5 km kumaodzanyemba kwePec pod Snezkou. Nakareba makubhiti gumi nemaviri (1299 m), haisi imwe yepamusoro-soro pamusoro peMakomo eKrkonoše, asi nemukurumbira wemamirimita mazana maviri nemakumi maviri neshanu (kukwirira kubva pachigadziko neLiščí hora pamusoro peHrnčířské Boudy), ndiyo gomo rechitatu rakatanhamara mumakomo eKrkonoše.
Benecko uye Giant Mountains kubva kumusoro
Benecko musha unogara muGiant Mountain, iri mudunhu reJilemnice, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedunhu reSemily. Iyo ine zvikamu zvisere (Benecko, Dolní Štěpanice, Horní Štěpanice, Mrklov, Rychlov, Štěpanická Lhota, Zákoutí uye Žalý). Akagara pano angangoita 1 100 vagari.
Nzvimbo yekugadzirisa mudunhu reBenecko yafamba nekufamba kwenguva zvichienderana nemabasa ehupfumi aripo. Nzvimbo yepakutanga yenhoroondo yekugara yaive Horní Štěpanice - chigaro, icho chakamiswa munzvimbo yekutandarira ye Štěpanice castle. Chekutanga kutaurwa nezvacho chinodzokera kuma1304, apo chivakwa chakavambwa naJohn weWallenstein sekusimbisa kwechikamu chekutanga kwenyika. Zvichangobva kuwanikwa pakuchera matongo, zvisinei, zvinoratidza kunyange dzimba dzekare, zvichisimbisa fungidziro yaBalbín kuti nzvimbo iyi yakagadziriswa kutanga kwa1254 naHenry weWallenstein. Horní Štěpanice yakanga ine mamiriro etaundi kusvika muna 1524. Imba yohushe yakazopedzisira yasiyiwa muna 1524, maererano nezvinhu kubva muna 1543 yakatoverengerwa dongo.
Benecko akatanga kutaurwa muna 1628 saBhenešsko, chigaro cheBoshešov. Imwe tsananguro ye…
Boiler Giant Makomo uye usiku husiku
Iyo boiler (Kesselkoppe muchiGerman) ipamusoro rakakura riri mumakomo akakwirisa eCzech emakomo eGiant. Inowanikwa mudunhu ravo rekumadokero mudunhu reSemily mudunhu reLiberec, iyo yepamusoro yepamusoro yazvo. Iri igomo regumi kwazvo muCzech Republic. Munguva yakapfuura yainzi zvakare Krkonoše uye Kokrháč. Iro gomo rinowanikwa 1435 km kumabvazuva kwemukurumbira ski resort Rokytnice nad Jizerou. Kune mamwe matanho akakosha munzvimbo dzakakomberedza, seLysá hora (10 m), Harrach's Stones (5 m) kana Vlčí Ridge (1344 m). Iyo yakakomberedzwa neDiki uye Yakakura Boiler Pit kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, ayo anowanzoiswa mungozi neavalches munguva yechando. Kufanana neiro rese reMakomo eGiant, iyo boiler yakaenzverwa neHercynian kuputira uye inowanzo kuve mica.